Refrigerators ọkwa azụmahịa |Nenwell-China
Kpọọ anyị taa
Azụ Bar friji
Ngwa ngosipụta iko 4 akụkụ
Rails Slide Compex
Ọnụ ụzọ ngwaahịa
Igwe nju oyi nke azụmahịa
Nenwell na-enye ihe ngwọta OEM na ODM mgbe niile iji nyere ndị ahịa aka n'ịzụta na iji ụlọ ọrụ na-ere ahịaIgwe nju oyi nke azụmaahịanke ọma.N'ime ndepụta ngwaahịa anyị, anyị na-ekewa ngwaahịa anyị n'ime ngwa nju oyi & friza azụmahịa, mana ọ nwere ike isiri gị ike ịhọrọ nke ziri ezi na ha, ọ nweghị ihe ọ bụla, enwere nkọwa ndị ọzọ n'okpuru maka ntụaka gị.
Igwe nju oyi nke azụmahịaA na-ekewa ya dị ka igwe nju oyi nke sistemu jụrụ oyi nwere ike ịchịkwa okpomọkụ n'etiti 1-10 Celsius C, a na-eji ya eme ihe maka oyi na nri na ihe ọṅụṅụ karịa 0 Celsius iji mee ka ha dị ọhụrụ.A na-ahazi ngwa nju oyi azụmahịa n'ime ngwa ngosipụta na ngwa nchekwa nchekwa.friza azụmahịapụtara akụkụ na-ekpo ọkụ nke usoro refrigeration nwere ike ịchịkwa okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius, a na-etinyekarị ya maka oyi nri ka ọ nọrọ n'ọnọdụ oyi kpọnwụrụ iji mee ka ha dị ọhụrụ.A na-ekekarị friza azụmahịa ka ọ bụrụ friza Ngosipụta na friza nchekwa.
Azụmahịa Single Swing Glass Door Beer & Coke Drink Bottle Back Bar Cooler Fridge
Ikike nchekwa: 138 lita.
Otu ọnụ ụzọ azụ mmanya ngwa nju oyi.
na fan na-enyere aka jụrụ usoro.
Maka idobe ihe ọṅụṅụ oyi na ngosi
Elu na elu-ọkwa okokụre silver agba.
Ọtụtụ nha dị maka nhọrọ.
Igwe anaghị agba nchara mputa & aluminum ime.
Digital okpomọkụ njikwa na ihuenyo ngosi.
Shelf dị n'ime ime dị arọ ma nwee ike ịhazi ya.
Oriri ike dị ala na obere mkpọtụ.
Na-arụ ọrụ nke ọma na mkpuchi thermal.
Ọnụ ụzọ mgbagharị enyo na-adịgide adịgide.
Na mkpọchi ọnụ ụzọ na ọnụ ụzọ panel bụ akpaaka mmechi ụdị.
Na mpempe igbu gbasaa osisi dị ka evaporator.
Ụkwụ ala maka ntinye mgbanwe.
Ọnụ ụzọ iko Ugboro abụọ Azụmahịa Ihe ọṅụṅụ oyi na ihe ọṅụṅụ Beer na-egosipụta azụ Bar Cooler Fridge
Ikike nchekwa: 208 lita.
Igwe nju oyi na azụ mmanya nwere sistemu nkwado nkwado fan.
Maka idobe ihe ọṅụṅụ oyi na anụ ọhịa bea echekwara ma gosipụta ya.
Black igwe anaghị agba nchara mputa & aluminum ime.
Ọtụtụ nha bụ nke optonal.
Digital okpomọkụ njikwa.
A na-edozi shelves ndị nwere nnukwu ọrụ.
Zuru oke na mkpuchi thermal.
Ụdị ụzọ mmechi akpaaka.
Mkpọchi ọnụ ụzọ bụ nhọrọ dị ka arịrịọ.
Emechara na mkpuchi ntụ ntụ.
Black bụ ọkọlọtọ agba, agba ndị ọzọ nwere ike ịhazi ya.
Ihe ọṅụṅụ ọnụ ụzọ enyo na-akwagharị azụ ahịa ugboro abụọ yana karama mmanya azụ mmanya ngosi ngwa nju oyi
Igwe nju oyi karama azụ nwere sistemụ jụrụ oyi na-enyere aka.
Ọtụtụ nha bụ nhọrọ.
A na-eji ugegbe ọkụ na-adịgide adịgide mee oghere ọnụ ụzọ na-amị amị.
Eji mkpọchi ụzọ mechie ụzọ akpaaka.
N'okpuru Counter Single Swing Solid Door Ihe ọṅụṅụ oyi & Bear Back Bar nchekwa oyi oyi
Otu ụzọ siri ike azụ mmanya ngwa nju oyi.
Maka idobe ihe ọṅụṅụ oyi na-echekwa ma gosipụta ya
Elu na elu-ọkwa ntụ mkpuchi.
Ọnụ ụzọ ụzọ igwe anaghị agba nchara nwere ụfụfụ n'ime.
Na mkpọchi ọnụ ụzọ na gaskets magnetik.
Obere ihe ọṅụṅụ oyi na-atụ n'ọnụ ụzọ siri ike okpukpu abụọ na ihe ọṅụṅụ azụ Bar Cooler Fridge
Ugboro abụọ siri ike ọnụ ụzọ azụ mmanya ngwa nju oyi.
Maka nchekwa na ngosi ihe ọṅụṅụ oyi.
Undercounter Triple Swing ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọnụ ụzọ iko na-amị amị & ihe ọṅụṅụ azụ Bar Cooler Fridge
Ikike nchekwa: 330 lita.
Ugogbe ụzọ azụ mmanya igwe nju oyi.
Sistemụ jụrụ oyi na-akwado fan.
Maka nchekwa na ngosipụta dị jụụ ihe ọṅụṅụ.
Eji galvanized mechie elu elu.
Ọnụ ụzọ na-ekugharị enyo nwere okpukpu atọ nwere mkpọchi ọnụ ụzọ.
Ogwe ọnụ ụzọ nwere gesket magnetik maka mmechi akpaaka.
N'okpuru Counter Black 3 Glass Door ihe ọṅụṅụ & mmanya mmanya karama Ngosipụta azụ Bar Cooler Fridge
N'okpuru counter ngosi azụ mmanya ngwa nju oyi.
Otu, ụzọ abụọ na ụzọ atọ bụ nhọrọ.
Ọ dị mma na mkpuchi thermal.
Ụdị mmechi akpaaka nwere mkpọchi.
Ihe ọ drinkụ drinkụ mmanya dị n'ọnụ ụzọ Triple Triple siri ike na ihe ọ drinksụ drinksụ azụ azụ friji
Commercial Undercounter Black 3 slide Glass Door Coke ihe ọṅụṅụ & ihe ọṅụṅụ oyi azụ mmanya ngosi refrigerator
Ngosipụta igwe nju oyi n'okpuru azụ.
A na-eji ugegbe ọkụ mee oghere ọnụ ụzọ na-amị amị.
Ngosipụta Multideck n'ime ụlọ ahịa ihe nri na ebe nchekwa friji nwere ọnụ ụzọ iko maka akwụkwọ nri.
Imepụta ákwà mgbochi ikuku mepere emepe.
Glass nwere mkpuchi okpomọkụ.
Ngalaba condensing arụnyere n'ime ya
Na usoro jụrụ oyi.
Nnukwu ikike nchekwa.
Maka nchekwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ngosi.
Dakọtara na refrigerant R404a.
Usoro njikwa dijitalụ na ihuenyo ngosi.
Nhọrọ nha dị iche iche dị.
5 oche nke ime ime kemeghi.
Ịrụ ọrụ dị elu na ogologo ndụ.
Igwe anaghị agba nchara adịchaghị nke nwere ngwụcha ọkwa dị elu.
White na agba ndị ọzọ dị.
Low mkpọtụ na ume compressors.
Ọla kọpa tube evaporator.
Igbe oriọna kacha elu maka mgbasa ozi.ọkọlọtọ.
Supermarket nkwụnye n'ime Multideck mepere emepe ihe ọ drinkụ drinkụ ikuku ikuku
Iko akụkụ na mkpuchi okpomọkụ.
Ngalaba condensing arụnyere n'ime ya.
Maka nchekwa ihe ọṅụṅụ na ngosi.
6 oche nke ime ime kemeghi.
Plug-In-Multideck mepere emepe ihe ọ drinkụ mmanya na-ere ngwa nju maka ngosi ụlọ ahịa
Maka nchekwa na ngosi ihe ọṅụṅụ ụlọ ahịa.
Igwe ọnụ ụzọ ngwa nju oyi
map saịtị|© Nwebiisinka - 2016 - 2022 Site na NENWELL refrigeration.Ikike niile echekwabara.
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ : Ngwaahịa refrigeration | Igwe nju oyi | Igwe n'ihu igwe nju oyi | Ihe ngosi ihe ngosi ice cream Ihe ngosi achicha | Ihe ngosi ụlọ ahịa | Azụmahịa ihe ọṅụṅụ oyi | Igwe nju oyi | friza biomedical